အချစ်လို့ခေါ်သလား-ထူးအယ်လင်း - ရွှေမြို့တော်
သြဂုတ်လ 25, 2013 တွင် 3:48pm အချိန် ချစ်ဦးမောင် မှတင်သွင်းခဲ့သည်
ဒါကိုကြိုက်တယ် အဖွဲ့ဝင် 137 ဦးကြိုက်ခဲ့သည်
Rating: Currently 4.24999/5 stars.
11:00pmမှာဇန်န၀ါရီလ 30, 2015 တွင် Zaw Min Tun မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် 11:00pmမှာဇန်န၀ါရီလ 30, 2015 တွင် Zaw Min Tun မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် like...... 9:12pmမှာနိုဝင်ဘာလ 11, 2014 တွင် စွမ်းကိုကို မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် good 1:36pmမှာစက်တင်ဘာလ 27, 2014 တွင် စိုင်းဆေထင် မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ထူးအယ်လင်းသီချင်းကကောင်းပါတယ်
9:21pmမှာသြဂုတ်လ 30, 2014 တွင် အောင်ဇော်သန်း မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ကြိုက်တယ်ဗျရွေမြိုတော်ထဲဝင်တိုင်းနားထောင်မိတယ် 3:28amမှာသြဂုတ်လ 27, 2014 တွင် +!!!ကိုရဲ!!!+ မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် လွမ်းမိသွားပြီ
7:50pmမှာသြဂုတ်လ 17, 2014 တွင် Royal love မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် အရမ်းကောင်းတယ်ဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်နားထောင်လိုက်တိုင်းခံစားရတယ် 5:45pmမှာသြဂုတ်လ 17, 2014 တွင် snowhninway2011@gmail.com မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ဘယ်အချိန်မဆိုနားထောင်လိုက်တိုင်းအရမ်းကြိုက်တယ် 11:42amမှာဇူလိုင်လ 29, 2014 တွင် sithuaung မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ခံစားချက်အပြည့်ပါလို့ဒီသီချင်းကိုကြိုက်ပါတယ် 4:24pmမှာဇူလိုင်လ 22, 2014 တွင် ဖြူစင်သူ မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် အရမ်းကြိုက်တဲ့သီးချင်းပါ။ နားထောင်မိတိုင်း တစ်ခုခုကိုလွမ်းသလိုခံစားရတယ် 1
+ ! bk mar yar crystal + အခု အချိန်တွင် မြို့တော်၌ ၀င်ရောက်နေသည့်